Iyi ndiyo Riffle, iyo isingazivikanwe internet inovandudza TOR | Linux Vakapindwa muropa
TOR inzira yakachengeteka, asi iine zvikanganiso zvayo zvidiki. Ndosaka Riffle akazvarwa, anovimbisa kuita kunge TOR, asi isina zvikanganiso
Isu tichangobva kuziva nezve chirongwa chitsva chakabata pfungwa dzedu. Zviri pamusoro paRiffle, itsva isingazivikanwe internet system inoenderana neTOR, asi nemusiyano uyo ichaedza kuvhara kushomeka kwayo.
Vanhu vanoziva iyo TOR network zvishoma, vanozoziva kuti yavo system yekuvanza iyo IP kero iri kuburikidza nekuwedzera maodhi pakati pesosi nekuenda. Iyi shanduko yenzira inoita kuti kubatana kusazivikanwe, nekuti ngatiti iwe unonyatsorasa tarisiro yekuti ndiani atumira kubatana.
Zvakanaka, ino system ine poindi yakakomba isina kusimba. Pfungwa huru isina kusimba yeTOR ndeyekuti kana munhu achikwanisa kuziva node dzese dzafambiswa nekubatana, vanokwanisa kudzitevera nekutsvaga kuti meseji irikubvepi, zvichiparadza kusazivikanwa.
Neichi chikonzero, iyo Riffle system yakagadzirwa kubva kuSwitzerland, sisitimu yakavakirwa paTOR asi iyo inovhara kushomeka kwayo kukuru nemamwe masystem ekuchengetedza Kutanga, kwete chete iro data rinotumirwa kune imwechete node sezvaive muTor, asi inotumirwa kune akati wandei, nokudaro zvichiita kuti zvive zvakaoma kutsvaga.
Asi chinhu hachigumira ipapo, kubva Riffle Kurongeka kwenzvimbo kunotumirwa mapaketi kunochinjawo.. Kubatanidza izvi neyero yekutanga, isu takaumba mapoka evashandisi uye node, iwo maodhi ane data kubva kune anopfuura mumwe mushandisi. Nekuda kweizvi, zvinenge zvisiri kugona kutsvaga network kuti uone kuzivikanwa kwemushandisi.
Riffle ichiri mukuvandudzika uye haigone kuisirwa sezvo ruzivo rwuchiri kukwizwa. Kuti uwedzere kudya kwako, tine pano chinongedzo kune a Yepamutemo PDFkubva kumusiki weRiffle, kutsanangura kuti izvi zvinoshanda sei Nezvose zvishoma zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyi ndiyo Riffle, iyo isingazivikanwe internet inovandudza TOR
Azpe, zita rechinyorwa harina maturo.